Ogaden News Agency (ONA) – Taliska Wayaanaha & Dalka Jarmalka oo Kala Xidhiidh Furtay.
Taliska Wayaanaha & Dalka Jarmalka oo Kala Xidhiidh Furtay.
Posted by Dulmane	/ September 13, 2017
Wariyaha dhinaca siyaasada uga soo warama Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa sheegaya in dowlada Jarmalka iyo taliska wayaanuhu ay kala xidhiidh furteen kadib mad madow sookala dhex galay.
Sida xogta aan kuhelayno taliska wayaanaha ayaa uyeedhay safiirkii ufadhiyay dalka Jarmalka, arintan ayaa kadambaysay kadib markii wasiirka hormarinta ee wadanka Germany uu sheegay in wadanka gumaysiga Itoobiya ay kajiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca bini’aadam nimada iyo dhanka siyaasadaba ah, wuxuuna wasiirku sheegay in ay xaaladu siixumaan karto hadii aan si dag dag ah wax looga qabanin.
Wasiirka hormarinta ee wadanka Jarmalka ayaa dhawaan socdaal kutagay qaybo badan oo wadanka gumaysiga Itoobiya ah, wuxuuna wasiirku booqday magaalooyinka Jigjiga iyo Goday ee wadanka Ogadenia halkaas oo sida uu sheegay uu kusoo arkay xaalado adag oo aan indhaha laga qabsan karin.
Wasiirka oo waraysi siiyay TV-ga Z TV oo wadanka Jarmalka laga leeyahay ayaa sheegay in uu wadanka Itoobiya kusoo arkay dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca bini’aadam nimada ah, wuxuuna sheegay wasiirku in xukuumada wayaanuhu ay qarinayso dhibaatooyinka kajira wadanka, sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in ciidanka wayaanuhu ay tacadiyo kala duwan ugaystaan shacabka kudhaqan guud ahaan wadanka Itoobiya.
Wasiirka ayaa beesha caalamka iyo dalkiisa Jarmalkaba ugu baaqay wax wax laga qabto dhibaatooyinka lixaadka leh ee kajira wadanka gumaysiga Itoobiya, wuxuuna wasiirku sheegay in hadaan si dhakhso ah wax looga qabanin lagaadhi doono xili aan waxba laga qaban karin.
Waraysiga wasiirka hormarinta ee dalka Jarmalka oo aad xaasaasi u ahaa ayuu kusheegay in taliska wayaanuhu uu kumashquulsan yahay hub gadasho iyo wadamada dariska ah oo uu weeraro halka dadkiisii ay abaaro iyo cuduro aafeeyeen.
Hadalkan kasoo yeedhay dowlada Jarmalka waxaa aad uga cadhooday kooxda TPLF ee uusduuga ku caan baxday waxayna si dag dag ah ugu yeedheen safiirkoodii joogay dalka Jarmalka.
Talaabadan ay wayaanuhu qaadeen ayaa lagu tilmaamay mid aan waxba yeelaynin dowlada Jarmalka, hase yeeshee wax wayn udhimi doonta taliska wayaanaha waxaana lasheegayaa in wayaanuhu ay waayi doonaan dhaqaale badan oo caydh ahaan loosiin jiray sanad kasta.